Kismaayo News » Golaha Jubbaland ee Norway oo la kulmay madaxa umuuraha bani’aadamnimada
Golaha Jubbaland ee Norway oo la kulmay madaxa umuuraha bani’aadamnimada
Kn:Jaaliyadda Jubooyinka ee ku dhaqan dalka Norway ayaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 19/02/2013 kulan la yeeshay u qaybsanaha dhinaca bani’aadanimada ee dalka NorwayAmbassador Torgeir Fyhri. Kulankan oo ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda, ayay labada dhinac kaga wada hadleen xaaladda ay ku sugan yahiin gobollada Jubooyinka iyo Gedo.
Jaaliyaddu warbixinta ka sokoow waxa ay diblomaasiga u gudbisay qoraal sharaxaad ka bixinaya duruufaha iyo dhibaatooyinka ay qabaan shacabka gobolladan iyo sida awaliyaadka u kala leeyihiin. Meelaha ay jaaliyaddu xoogga saartayna waxaa ka mid ahaa:
1. In dowladda Norway ay gacan ka gaysato dib u dajinta dadka gobolka dib ugu soo laabanaya.
2. Qalabaynta, dayactirka iyo dib udhiska Isbitaalka guud ee Kismaayo
3. In dowladda Norway ay ugu deeqdo magaalada Kismaayo baabuurta dab-damiska liyo Ambalaasyada.
4. In Dowladda Norway ay taageerto gacanna siiso shirka maamul u samaynta Jubaland ee dhawaan ka furmi doona magaalada Kismaayo.
Xubnaha shirka ka qayb galay ayaa ku booriyay Mr. Fyhri inay dowladiisu waqti, juhdi iyo dhaqaalaba galiso dib u dhiska dalkooda. Uqaybsanaha dhinaca bani’aadanimada dalka Norway ayaa u sheegay jaaliyadda Jubaland Council of Norway in dalkiisu garab istaagayo shacabka Soomaaliyeed , gacanna ku siin doono sidii ay uga soo kabsan lahaayeen dhibaatooyinkii halaakeeyay mudada kor u dhaafaysa labaatanka sano.